Ndakachinjira kuNextcloud. Ichi ndicho chiitiko changu neangu server | Linux Vakapindwa muropa
Ndakachinjira kuNextcloud. Ichi ndicho chiitiko changu neyangu sevha
Nei achifanira mushandisi gadzirisa yako wega masevhisi? Shure kwezvose Kune makambani anoita kuti maseva avo awanikwe mahara.Kuti isu tigadzirise zvinyorwa, kutaurirana nemumwe kana kuchengeta mafaera edu?
1 Chii chinonzi Nextcloud
2.1 Nei ndakachinjira kuNextcloud
3 Matambudziko uye kusagadzikana
Chii chinonzi Nextcloud
Nextcloud es yakavhurika sosi chikuva iyo inobvumidza kuchinjana pakati pevanhu vakasiyana nemidziyo. Kuti uienzanise nemapuratifomu ehupfumi zvakaita sekunge uine yako Google Drive / Karenda / Mifananidzo pane yako wega server.
Yako webhu interface inokutendera iwe kurodha pasi uye kurodha pasi mafaera, kubata khalendari, uye kuona mapikicha. Muchitoro cheapp iwe une zvirongwa zvinowedzera zvakanyanya mashandiro pamwe, pakati pevamwe; Vaverengi veEpub, vatambi venhau, mepu dzekutevera michina nezvimwe.
Nezve nguva, Panyaya yeLinux, ini ndinokurudzira iwe kuti uise iko kunyorera muApplication fomati (iyo Snap chitoro mutengi inowanzove isiri yechinyakare). Y pa Android iko kunoshanda zviri pamutemo. Unogona kuwana zvese iyi vhezheni uye iyo yeWindows, Mac uye nhare mbozha pano
Kana iwe uchida kuyananisa pakati pemidziyo, iyo Android mutengi inokurudzira kushandisa yakabhadharwa app, isai iyo panzvimbo. Vhura Sync izvo zvinoshanda zvakakwana.
OpenSync ine mukana wekuti zvakare inobvumirana neGoogle makarenda. Asi, kana iwe uchida kushandisa yakavhurwa sosi khalendari app, ini ndinokurudzira Mwedzi.
Kune yangu chikamu, ini ndakaisa mamwe maviri mafomu:
Carnet: An multimedia manotsi kunyorera. Iyo yekushandisa yakaiswa mune Inoteveracloud app chitoro, muGoogle application chitoro chemafoni uye desktop desktop kubva pano.
Mutariri webasa inonzi Task muchitoro cheapp uye Vhura Mabasa paGoogle's (iwo maapplication maviri akasiyana asi anoenderana. Ini handina kuisa imwe pa desktop.
Nextcloud it iwe unogona kuisa pane yako yakajairwa Linux kugovera uye shandisa neyako network network, kana in Raspberry Pi mudziyo. Muchiitiko chekusarudza rekunze server, kugadzira kurudziro kwakanyanya kuomarara. Sezvo izvo zvinopihwa zvisina kuenzaniswa, chinhu chakanakisa ndechekuti iwe ubvunze anovimbika mupiki uyo anokukurudzira kuti iwe uvake yako yekuisa na Nextcloud.
Kazhinji iwe uchazoda:
Dandemutande rewebhu: Sezvo ichave yekushandisa mukati, haudi .com, unogona kushandisa chero kumwe kumisikidzwa kuri kutengeswa.
Chitupa cheSSL. Bhurawuza ari kuomarara pamasaiti asingashandisi protocol yeHTTPS. Kumbira mupiki wako kana vachikubvumidza iwe kuti uise yemahara senge iwo anopiwa na Regai Tinyora.
Linux Server: Webhu sevha dzinomhanya pasi peWindows dzinowanzo kuve dzinodhura.
PHP vhezheni 7.2 kana yepamusoro uye kugona kuisa mamwe ma module
Mikana yekugadzira uye kugadzirisa dhatabhesi.
Ndakaona zvimwe zvinopihwa zvekutambira zvirongwa ne Nextcloud yakaiswa asi havana kutsanangura kumisikidzwa, saka ini handikwanise kuzviongorora. Kazhinji iwe unofanirwa kukarira izvo zvinozivikanwa seVPS kubata idzo dzine dzimwe nzira dzekumisikidza pasina kudhura seGore
Ruzhinji rwevanopa oipa control panel pamwe nevaroyi vekugadzira dhatabhesi Zvimwe zvinosanganisiraImwe mhando yekuunganidzwa kweScript seSoftaculous izvo shandura iyo Nextcloud yekumisikidza maitiro.
Nei ndakachinjira kuNextcloud
Kare kare ndakaverenga nhoroondo kubva kuCollegeHumor, saiti yakangoerekana yarasa purofiti nekusiya yayo pachikuva uye kuvimba Facebook. Zvakare Ndakataura kubva kuCode Spaces, kodhi yekuchengetedza sevhisi inorwiswa nema cybercriminals izvo zvakakonzera kuti vashandisi vayo varasikirwe nebasa rese rakachengetwa.
Kunyange zvakadaro usarambe zvachose dzimwe nzira dzekudyara (kunyanya kana zvasvika pakubatana nevamwe vanhu) Ini ndoda kuve nechokwadi chekuti yangu yekutanga sarudzo iri pasi pesimba rangu.
IKuita kwedu kwakavhurika sosi mhinduro kwakafanana nekurima yedu miriwo. Mhedzisiro yacho inogutsa kwazvo, asi kutanga iwe unofanirwa kuisa simba rakawanda, nguva nemari.
Ndine rombo rakanaka kuti ndinoda tekinoroji uye handinetse kushandisa nguva yangu yemahara kutsvaga mhinduro paInternet uye nekuisa, kudzima uye kudzoreredza. Asi kune freelancer uyo anoda miniti yega yega yenguva yavo yebasa kuti awane raramo, uye chavanoda chete munguva yavo yekusarudzika kutarisa Netflix, Ini handizoikurudziraku. Kana iwe uri SME uye unofanirwa kubhadhara nguva yekuwedzeredza yekudzidziswa kwevashandi vako.
Ndataura izvi, ndinoda kujekesa izvo kune emahara akavhurwa sosi maratidziro akavakirwa pa Nextcloud kune vashandisi vane mwero zvido. Tichazvikurukura mune inotevera chinyorwa.
Matambudziko uye kusagadzikana
Tanto ruzivo rwangu neSoftaculous yekumisikidza script pamwe neiyo Nextcloud web simaki yaive inonakidza kwazvo. Ini ndaifanirwa kukumbira mupi wangu kuti aise yekuwedzera PHP module uye hapana chimwe chinhu.
Dambudziko randinofanira kugadzirisa ndere ra kuisirwa hofisi suite. Imwe yesarudzo (Collabora Online) inoda kumisikidzwa pane yakasarudzika server. Kana zviri zveOffice chete, handikwanise kuiisa. Sezvineiwo idambudziko ndangariro dzakapihwa php.
Uyewo Ini ndinofanirwa kugadzirisa zvimwe zvinhu mudhatabhesi kukwanisa kushandisa emojis mumeseji mutengi. Asi pane zvese, ini ndagutsikana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Ndakachinjira kuNextcloud. Ichi ndicho chiitiko changu neyangu sevha
Kushandisa rakasiyana server reCollabora Office Online ndiyo imwe nzira yekuisa iyo, asi kwete iyo chete nzira.
Ndatenda nekutaura kwako.
Chinyorwa cheapp cheNextcloud chinokumbira iwe sevha yakasarudzika
Pane script yekumisikidza nextcloud ine Onlyoffice pamushini mumwe chete, asi zvinofungidzirwa kuti mushanduro 18 zvese zvakabatanidzwa uye hazvingadi kuita chero chinhu.
Ehe, iyoyo haishande kwandiri nekuda kwekushaya ndangariro.
Kwete, haina kubatanidzwa.
Ndakaiisa ne OnlyOffice uye inoshanda zvakanaka. Kana iwe uchida rubatsiro, ndiudze uye ini ndinotsvaga iyo info yekugovana. Ndatenda neruzivo
Iri dambudziko rekugadzirisa pane server yangu. Ndichazviona kana ndawana nguva
Linux 5.6 RC1 yakaburitswa neWireGuard rutsigiro, 2038 gadziriso, USB4 rutsigiro uye nezvimwe.